मेरो विचारमा सरकारी नै डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाउँदै जाऔँ ! नपुगेका दिन निजीलाई पनि गर्दै जाऔँ ! नक्सा लिएर बसौँ ! कता–कता अस्पताल छन् र कति बेला डेडिकेटेड गर्ने भनेर योजना बनाऔँ ! घरमै जाँचौँ तर सीमित स्रोतका बेला ज्वरो आएका शंकास्पदलाई जाँच्न र भर्ना गर्न सबै अस्पताललाई नभनौँ !
सरकारले तोकेको डेडिकेटेड कोरोना अस्पतला (सशस्त्र) ले कति जनाको उपचार गर्‍यो ? यसलाई पनि अर्को अवसर नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।
गहिरो संकट छ । सबै मिलेर सन्त्रास निर्मूल गर्ने बेलामा कांग्रेसी नेताहरूलाई सत्ता साझेदारी चाहिएको छ । चुनावमा तीन बर्लाङ खाने, अनि संकटमा च्याँखे थाप्ने ? लाज भन्ने शब्द कांग्रेसको भण्डारमा रित्तिएकै हो त ?
गिर्जाबाउ र सिटौला काम्रेटले नानीका बालाई सदनमा घुसाम्दाका दिनमै कांग्रेस जत्तिको नकच्चरो पार्टी कुनै हुँदैन भन्नी थाहा पाइयाथेन ?
लकडाउनकालमा दशौँ लाख बेरोजगार श्रमिक भोकै छन् । तिनलाई राहत प्याकेज ल्याऊ भनेर चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि कम्निस्ट उर्फ जनताको सेवक हुँ भन्ने सरकार मृतवत् मौन छ । घुस र कमिसनको पैसो बाँड भनेको होइन । सरकारी कोषको पैसोले सहयोग गर्न सरकारले किन दाँतबाट पसिना चुहाएको होला ?
सरकारले गर्ने निर्णय परिपक्व हुनुपर्छ । गृहकार्य गर्दै होला, ट्वीट गर्न र मुख बजार्नजस्तो सजिलो हुन्न ।
चीन आफूलाई पाको पुस्ताको देश भन्ने ठान्छ । भारत युवाहरूको देश भन्ने सोच्छ । नेपाल...! मलाई लाग्छ बच्चाहरूको देश हो । चञ्चले, छुकछुके, जिज्ञासु, लाडप्यारे ! विश्व महामारीको बेला नेतादेखि जनता हेरौँ, कति अबोध, कति निर्दाेष, कति निश्छल ! हाम्रो बालापन देखेर संसार कति भावविह्वल होला ।
ढंग नपुर्‍याएर रंग गर्ने नेपाली न परियो । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबमा भने पहाडै पल्टाउने, व्यवहारमा भने सिन्को नि नभाँच्ने हामी वीर नेपाली !